Shariif Xasan oo ku Wajahan magaalada Xudur iyo Xog ku aadan Ujeedka socdaalkiisa Shariif Xasan oo ku Wajahan magaalada Xudur iyo Xog ku aadan Ujeedka socdaalkiisa – dulmidiid
August 12, 2017 war No comments
Shariif Xasan oo ku Wajahan magaalada Xudur iyo Xog ku aadan Ujeedka socdaalkiisa Shariif Xasan oo ku Wajahan magaalada Xudur iyo Xog ku aadan Ujeedka socdaalkiisa
Warar lagu kalsoonaan karo oon helnay ayaa sheegaya in Madaxwenaha Maamulka Koonfur Galbeed Soomaaliya iyo xubno katirsan Golihiisa Wasiirada ay ku wajahan yihiin magaalada Xudur ee xarunta gobolka Bakool.
Shariif Xasan ayaa magaaladaasi kulan lula qaadan doona saraakiisha ciidankaKoonfur Galbeed iyo masuuliyiinta magaalada Xudur, waxa uu sidoo kale Madaxweynaha qiimeyn doonaa dagaalka u dhaxeeya Al Shabaab iyo dagaalyahano taabacsan Abuu Mansuur oo ku dagaalamaya Duleedka Xudur.
Sida aan Wararka ku heleyno ujeedka Socdaalka Shariif Xasan ayaa lagu tilmaamay mid uu ku doonayo in lagu garab siiyo Sheekh Muqtaar Roobow Abuu Mnasuur oo dagaal xoogan kala kulmaya dagaalyahano katirsan Al Shabaab.
Shariif Xasan ayaa sidoo kale Abuu Mnasuur ku cadaadinaya in uu kasoo laabto fikirkiisii hore ee dagaalka iskuna soo dhiibo maamulkiisa, waxaana lasoo sheegayaa in masuuliyiin katirsan Koonfur Galbeed la xariireen Abuu Mandsuur una socdo wadahadalo hoose.
Dhinaca kale Wasiiro iyo masuuliyiin kale oo katirsan maamulka Koonfur Galbeed Soomaaliya oo ku sugan meel ku dhaw deegaanka Abal uu joogo Abuu Mansuur ayaa sheegay in ay diyaar u yihiin in ay garab siiyaan Abuu Mansuur kana difaacaan Al Shabaab.
Wasiirka amniga maamulka K/galbeed Xasan Xuseen Maxamed ayaa sheegay in ka maamul ahaan ay ka barbar dagaallami doonaan Sheekh Mukhtaar Roobow Abuu Mansuur oo xiligan wajahaya duulaan kaga yimid Kooxdii uu horey uga tirsanaa ee Al Shabaab.
Dad badan ayaa isweediinaya waxa Maamulka Koonfur Galbeed Soomaaliya taageerada ugu muujinayaan Sheekh Muqtaar Roobow Abuu Mansuur oo kamid ahaa Hoganaka ugu sareeya Kooxda Al Shababa, Abuu Mansuur ayaana wali ku dhawaaqin in uu kasoo baxay Al Shabaab waxna iska badelay fikirkiisii hore.
Dowlada Mareykanka ayaa dhawaan liiska waxa loogu yeero Argagaxisada ka saartay Afhayeenkii hore ee Al Shabaab Abuu Mansuur, waxaana suurto gal ah in Abuu Mnasuur uu fikirkiisa wax ka bedelo iskuna soo dhiibo dowlada Soomaaliya.